मन्त्री मात्रिका यादवको कदम पछि कर्मचारीमा खैलाबैला – Setosurya
मन्त्री मात्रिका यादवको कदम पछि कर्मचारीमा खैलाबैला
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादव फेरि मन्त्री बनेका छन् । उनी केपी शर्मा ओली कम्पनीका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका हुन् । उनले सोमबार सपथग्रहण गरे । अनि पहिलो दिन नै क्रमभंगता गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदबहालीको क्रममा एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चलन छ ।
उनले ढुवानी पारबहन सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुथियो । तर मानेनन् । उनले पहिले पढेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान लिए । एक किसिमले यो राम्रो पनि हो । ज्ञान नभइ हस्ताक्षर गर्नुको तुक नै रहँदैन ।
उनी यसै पनि हठी स्वभावका छन् । उनी वन मन्त्री हुँदा १० वर्षअघि स्थानीय विकास अधिकारी एलडीओलाई ट्वाइलेटमै थुनेका थिए ।
यस्तो थियो घटना –उनले त्यो बेलामा ललितपुरका एलडीओलाई ट्वाइलेटमै थुनिदिए । त्यसपछि मच्चियो विरोध । यादवको विरोधमा अहिलेको सत्तासाझेदार एवं पार्टी एकताधारी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनले मन्त्रालयमा धर्ना दिएर काममै अवरोध भएका थियो ।
ललितपुरको एउटा सामुदायिक वनमा गैरकानुनी ढंगले ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहेको थियो । स्थानीयले विरोध गरे तर टेरिएन । मन्त्री यादवले थाहा पाए ।
अनि यही विषयमा सोधपुछ गर्न मन्त्री यादवले स्थानीय विकास अधिकारी लगायतका सरोकारवालाहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाए ।
वातावरणमा असर परिरहेकोले कानुन अनुसार ढुंगाखानी बन्द गर्नलाई मन्त्री यादवले ती एलडीओलाई भने । तर उनले टेरेनन् ।
एलडीओ झन् बाझेछन् । अनि के चाहियो र त्यो समयअघि नै अंगरक्षक सेनालाई समेत थुनिसकेका यादवले एलडीओलाई पनि ट्वाइलेटमा थुनिदिए ।
यादव त्यसबेला जति बदनाम भए त्यति नै उनले आफू राम्रो काम गर्न अवरोध गर्नेलाई पनि त्यसै गर्ने सन्देश दिए । तर मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले हरेक निर्णयमा यस्तै सनकपन देखाउँदा राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । यसपटक कस्तो काम गर्लान् त उनले रु १० वर्षअघिको पारा देखाउलान् कि सुधारोन्मुख प्रदर्शन भन्ने चासो बढेको छ ।
उनले सोमबार नै मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउन सामूहिक सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले समन्वयका साथ अधिकार र कर्तव्यबोधलाई ध्यान दिएर देश र जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
यो सचेतना पनि हो र चेतावनी पनि हो । तर उनले भनेका छन् ‘अहिले भाषण हैन काम गर्ने बेला हो, मलाई गलत हुनबाट रोक्नुहोला, बेलैमा सजक गराउनुस्, हामी सबै मित्रवत् व्यवहारका साथ मन्त्रालयलाई नमूना बनाउनेतर्फ अघि बढौँ ।’, उनले भने ।
उनले आफू मित्रवत् व्यवहारका साथ मन्त्रालयको काम कारबाही सम्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै अनुशासन तोडेर गढबड गर्नेका लागि मात्र आफू खतरा भएको र त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री यादवको रवैया कस्तो हुने हो केही समय त पक्कै कुर्नु बेश हुनेछ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्रीले गरे भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने उद्घोष, सक्लान् त प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार रोक्न ?
कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा यस्तो अबैध सामान भेटिएपछि ! प्रहरीले गर्‍यो बरामद
लुक्लामा दुर्घटना भएको गोमा एयरका सहचालकको पनि निधन
बहुरूपी गठबन्धन तोड्दै प्यूठानमा एमाले पहिलो शक्ति
घटस्थापनाको तीन दिनअघि तेस्रो चरणको चुनाव, दसैंको तयारी गर्ने कि भोट माग्ने ?
अब यी कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको छ
पर्वतको देउपुरमा भेटियो अनौठो गुफा
सरकार गठनका लागि यस्तो छ अोली र दाहालको तयारी : कहिलेसम्म बन्छ आगामी सरकार ?
दुई दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु, नौ घाइते
प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दिन कहाँ हराएका थिए यी सांसद?
प्रदेश नं ४ मा सभामुख बन्ने भए पर्वतका नेत्र अधिकारी
पार्टी एकतालाई अनुमोदन गर्न एमालेले आजै बोलायो स्थायी कमिटीको बैठक : भोलि केन्द्रीय कमिटी बैठक